महावतार बाबाजी Info. About. What's This?
ⓘ महावतार बाबाजी
बाबाजीको बारेमा कुनै ऐतिहासिक विवरण छैन । स्वामी प्रपन्नाचार्यले उहाँलाई हैडाखानी बाबा भन्नुभएको छ । महावतार बाबाजीको बारेमा लोककथा तथा जनश्रुतिहरु प्रसस्त पाइन्छन् । उहाँले लाहिडी महाशय लाई क्रियायोगको दीक्षा दिएर संसारभर फैलाउने आदेश दिनुभएको थियो ।
परमहंस योगानन्द जी लेख्नुहुन्छ ः– बद्रीनारायणको उत्तरमा स्थित हिमालय शैलशृङ्खला लाहिडी महाशयका गुरु बाबाजीको उपस्थितिले अझै धन्य बनाएको छ । एकान्तवासी गुरुदेवले आफ्नो शरीरलाई सदीयौँ, सम्भवतः सहस्रौँ वर्षसम्म यथावत् राख्नुभएको छ । मृत्युञ्जय बाबाजी एउटा अवतार हुनुहुन्छ । यस संस्कृत शब्दको अर्थ हो ओर्लनु, यसको व्युत्पत्ति अव अर्थात् तल र तृ अर्थात् आउनुबाट भएको हो । हिन्दू शास्त्रहरूमा अवतारको अर्थ ईश्वर देहधारिका रूपमा अवतरित हुनु हो ।
बाबाजीको आध्यात्मिक अवस्था मानवकल्पनाभन्दा पर छ । श्री युक्तेश्वरजीले भन्नुभयो । मानवको सीमित दृष्टिले उहाँको अतीन्द्रिय आध्यात्मिक ज्योतिलाई हेर्न सक्दैन । यस अवतारको उचाइको स्पष्ट चित्र कल्पना गर्नु सम्भव छैन । यो अकल्पनीय छ ।
लाहिडी महाशयले भेट्दाको अनुभव
बाबाजीसँग लाहिडी महाशयको पहिलो भेट एउटा अचम्भित पार्ने कथा हो र अजम्बरी गुरुका बारेमा विस्तृत झलक दिने केहीमध्ये एक हो ।
म तेत्तीस वर्षको हुँदा मैले बाबाजीलाई पहिलो पल्ट भेटेँ । लाहिडी महाशयले बताउनुभयो । सन् १८६१ मा म दानापुरमा सरकारी मिलिट्री इन्जिनियरिङ् विभागमा लेखापालको पदमा नियुक्त थिएँ । एक दिन बिहान अफिस म्यानेजरले मलाई बोलाए ।
लाहिडी – उनले भने हाम्रो मुख्य कार्यालयबाट भर्खरै एउटा तार आएको छ । तिमीलाई रानिखेत सरुवा गरिँदै छ र जहाँ हालै आर्मी पोस्ट स्थापित गरिएको छ ।
एकजना नोकर साथमा लिएर म ५०० माइलको यात्रामा निस्कें । घोडा र बग्गी यात्रा गर्दै तीस दिनमा हामी हिमालयस्थित रानीखेत आइपुग्यौँ ।
मेरो अफिसको काम धेरै गाह्रो थिएन, म घण्टौँ भव्य पहाडको भ्रमण गर्ने समय पाउँथेँ । मैले हल्ला सुनेँ कि धेरै सन्तहरूको उपस्थितिले त्यो क्षेत्र धन्य भएको छ । मलाई उनीहरूलाई हेर्ने उत्कट इच्छा भयो । एक दिन दिउँसो म पहाडमा डुल्दै थिएँ टाढाबाट कसैले मेरो नाम काढी बोलाएको सुनेर म आश्चर्यचकित भएँ । म द्रोणगिरी पहाडको उकालो फूर्तिसाथ चढ्दै गएँ । अँध्यारो भएपछि फर्किँदा जङ्गलको बाटो पहिल्याउन सक्दिनँ होला भन्ने सोचेर एकछिन चिन्तित भएँ ।
अन्त्यमा म एउटा खुल्ला चौरमा पुगेँ जसको चारैतिर गुफाहरु थिए । एउटा पहाडी चट्टानमाथि एकजना नवयुवक स्वागतमा आफ्ना हात फैलाएर खडा थिए जो मुस्कुराइरहेका थिए । मैले आश्चर्यका साथ देखेँ कि ताम रङ्गको कपालबाहेक उनको अनुहार मसँग एकदम गजबले मिल्दोजुल्दो छ ।
लाहिडी तिमी आयौ । सन्तले मलाई स्नेहपूर्वक हिन्दीमा सम्बोधन गर्नुभयो । यहाँ गुफामा आराम गर । तिमीलाई डाक्ने म नै हुँ ।
उहाँ नै महाबतार बाबाजी हुनुहुन्थ्यो ।
बाबाजीका भक्तहरू विश्वभर छरिएर रहेका छन् । सुपरस्टार रजनीकान्त पनि बाबा का भक्त हुन् ।
Wikipedia: महावतार बाबाजी